Chitoro: Kutaridzika Kutaurwa Kwenyaya kweiyo iPad | Martech Zone
Chitoro: Kutaridzika Kutaurwa Kwenyaya kweiyo iPad
China, May 22, 2014 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Isu nguva pfupi yadarika tanga tine webinar pane sainzi yekutaura nyaya neshamwari dzedu ku Wemaisense.tv. Hazvisi zvitsva mukutengesa uye kushambadzira, asi nekuda kwechimwe chikonzero, kutaura nyaya kwakangotanga kucherechedza mumakore achangopfuura. Vatengi nevatengi vebhizimusi vakagara vachishandura zviri nyore kana paine chisungo chepamoyo pakati pavo nemavara avanoda… asi zvinonakidza kuti vezvenhau vangani, zvakanyorwa uye zvinotyisa zvinoramba zvichititambudza paterevhizheni newebhu.
Izvo zvakanaka kuona mapuratifomu ari kuchinja kubatsira vashambadziri kuvandudza nyaya dzavo pane kungotsvaga pamusoro pekuchengetedza kana maficha. Chitoro iyo isununguka iPad app inotarisira kuchinja izvi. Imba yekuchengetera inoita kuti vashandisi vavake nyaya kubva kumavara, vhidhiyo, uye mifananidzo, inosanganisira zvemukati kubva kunowanikwa zvinosanganisira iPad Kamera Roll, Dropbox, Flickr, uye Instagram.
Mhedzisiro yacho mamwe marongero akanaka anoteerera anoteerera kune webhu, nharembozha uye kutariswa kwehwendefa. Kana iwe uine iyo iPad app, kwete chete iwe unogona kuvaka nekunyora yako wega nyaya, iwe unogona zvakare kupururudza kuburikidza neazvino nyowani nyaya akave akagadzirwa neStorehouse.
Zvakare, iyo rondedzero yenyaya inogona kuiswa mune peji rewebhu. Heino muenzaniso:
Mhedzisiro mhedzisiro inoonekwa ine mikana isingaverengeki - kusanganisa zvese zvinhu uye kuwedzera pakukwanisa kufarira, kugovana, kana kutaura pamusoro penyaya yakagovaniswa.
Tags: apurocantaloupe.tvDropboxFlickrInstagramiosiPadipad appYeMahara neThebhu KushambadzirawirirananyayaStorytellingpiritsi
Zvemagariro Swipe: Anonzwisisika Mushandisi Chiitiko cheMipiro Yezvipo
Email Kushambadzira Stats Iwe Unofanira Kuziva